ओली र प्रचण्ड राजा हुन्, लडिन्छ यिनीहरुसँग’ – mYKantipur.Com
ओली र प्रचण्ड राजा हुन्, लडिन्छ यिनीहरुसँग’
२०७५, २३ पुष सोमबार १५:२५
अस्ति म इलाम गएँ । म पचहत्तरै जिल्लामा बारबार गएको छु । मैले देखेको छु, कहाँ के चाहिएको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुमका पूर्वीभाग र इलामका मान्छेले उपचार गर्न झापा, बिराटनगर, धरान वा सिलिगुडी जानुपरिरहेको छ ।
ओलीको कुरो गरौं ।
ओलीजीले चाहिँ उनको क्षेत्रमा एउटा भ्यु टावर खोल्ने रे । त्यसमा एक अर्ब थप्यो भने त उनकै क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ । त्यो भ्यु टावर त प्राइभेटलाई दिए भैहाल्यो नि । टिस्टासम्म देखिने भ्यु टावर रे ! साम्यवादी नेताको त्यो प्राथमिकता हो ? पुँजीवादी देशका क्रोनी क्याटालिस्टले पनि लाज मान्छन् यस्तो गर्न ।
म इलाममा मेडिकल कलेज, अस्पताल खोल्नुपर्छ भनेर दबाव दिन गएको हो । त्यो मेची अञ्चल त ओलीजीको क्षेत्र हो । झलनाथ खनालजीको हो । सुवास नेम्वाङजीको हो । यी छन् नि आफूलाई युवा नेता हो भन्छन् (योगेश) । जनताले दिएको तलब भत्ता खान्छन् । तर, यिनीहरु माफियाको काम गरिराखेका छन् ।
ओली र प्रचण्ड राजा हुन् !
उनीहरु भनेका त तीन करोड नेपालीका नोकर हुन् । म त सेवक पनि भन्न चाहदिनँ कि नोकर हुन् । र, सार्वभौम भनेको को रहेछ भने ओलीजी र मन्त्रीहरु रहेछन् । केही हदसम्म प्रचण्डजी रहेछन् ।
’cause, ओली र प्रचण्डजीले कालोलाई सेतो भनिदिएदेखि त्यहाँका सबै सांसदहरु कालोलाई सेतै भन्छन् । त्यो संसद सार्वभौम हैन । ओलीजी र प्रचण्डजीले जे भने, त्यही हुने हो । र, उनीहरुले गर्ने भनेकै माफियाको काम गरिदिने हो । माफिया, बिचौलिया र दलाल । अहिले राज्य माफिया, बिचौलिया र दलालहरुले चलाइरहेका छन् ।
सार्वभौम को हो ? ओलीजी र त्यसपछि प्रचण्डजी हो । अहिले उनीहरु राजा हुन् । हामीलाई अहिले पनि रैतीको व्यवहार गरिरहेका छन् । हामी नेपाली रैती हैन, सार्वभौम नेपाली नागरिक हौं । र, सरकार, चाहे व्यवस्थापिका भनौं, चाहे न्यायपालिका, यिनीहरु जनताका सेवक हुन् । कुरो बुझ्नु भो त ?
मार्सी चामल खुवायो भन्दैमा सम्बन्धन दिने ?
बीएण्डसीलाई सम्बन्धन किन दिने ? अरुलाई किन नदिने ? बीएण्डसीमा प्रचण्डजीको अबौर्ं रुपैयाँ छ भन्दैमा दिने हो र ? अथवा ओलीजी र प्रचण्डजीले उनीहरुको मार्सी चामल खाए भन्दैमा सम्बन्धन दिने हो र ? अरुचाहिँ छैनन् ?
डा. केसीलाई योगेशको जवाफः तपाईले आफ्नै स्तर गिराउनुभयो
नेपालमा १५ वटा मेडिकल कलेज छन् । तीनवटा मात्रै सरकारी मेडिकल कलेज छन् । संसारमा कहीँ पनि नभएको ! अनि के उनीहरुलाई मात्र सम्बन्धन दिँदै हिँड्ने ?
ऐनमा त लेखि नै सकेको छ नि, जुन क्षेत्रमा हो, त्यो क्षेत्रको युनिर्भसिटीले आफ्नो आंगिक क्याम्पस खोल्छ । त्यसपछि उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने हो । त्यो कुरा प्रावधानमै उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रिकामा लेखिएको मैले हिजो पढेँ । त्यसैका आधारमा मैले भनेको हुँ, उनीहरु त सार्वजनिक किन गर्थे ? गर्दै गर्दैनन् । उनीहरुलाई त षडयन्त्र गर्नु छ । फेरि चोरी काम गरेर देश लुट्नु छ । मफिया पोस्नु छ । माफिया पोस्नु भनेको आफू पोस्नु हो ।
नेताका ठाउँमा हामीले लड्नुपर्ने ?
ओलीजी, योगेश भट्टराईजी, खगराज अधिकारीजी, आफूलाई साम्यवादी भन्ने तर, यिनीहरु जनता मार्न माफियासँग लागेका छन्
त्यो (नेताका) ठाउँमा अस्पताल बनाऔं भनेर हामी लड्छौं । त्यहाँबाट निर्वाचित गरेको सांसदले चाहिँ माफियालाई पोसेर जनतालाई धोका दिनेे ? जनताको भुँडीमा लात्ती मार्ने ? यो जनतालाई धोका दिएको हैन ? भोट दिएपछि जनताको हकहित गर्नुपर्ने हो नि । के सोझासाधा नागरिकलाई बेवकुफ बनाउने ? योगेश भट्टराईजी, भन्नोस् त ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र तेथ्रथुमका मान्छेको यही अवस्था छ । उनीहरु उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपर्छ । त्यहीँ अस्पताल बनाइदिएको भने के हुन्थ्यो ?
हामीले जुन गरिरहेका छौं, यो भनेको वास्तवमा त उनीहरुको (सरकारको) काम हो नि । ऐन बनाऊ भनेर हामी लडिरहेका छांै । यो काम त तिनै नेतृत्व पक्षको हैन ?
सरकारी मेडिकल कलेज तीनवटा मात्र छन् । १५ वटा निजी छन् । संसारमा काहीँ नभएको यो । अब केलाई निजी हुनुपर्‍यो ? अब त सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्‍यो । ९५ प्रतिशत नेपालीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर/नर्स पढाउन सक्दैनन् । भनिसकेपछि पाँच प्रतिशतका लागि चाहिँ १५ वटा मेडिकल कलेज ? अनि ९५ प्रतिशतलाई चाहिँ जम्मा तीनवटा सरकारी मेडिकल कलेज ?
हामीले जुन गरिरहेका छौं, यो भनेको वास्तवमा त उनीहरुको (सरकारको) काम हो नि । ऐन बनाऊ भनेर हामी लडिरहेका छौं । यो काम त तिनै नेतृत्व पक्षको हैन ? ती सम्झौता हामीसित गर्ने, सम्झौता तोड्ने । अनि यिनीहरु माफिया नभएर को हुन् ? यिनीहरु साम्राज्यवादी हुन् । जनतामारा, विद्यार्थीमारा हुन् । माफियावादी हुन् ।
लडिन्छ यिनीहरुसँग !
मैले पहिले नै भनेको थिएँ, अनसन सिद्धिइसकेपछि म प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई भेट्न गएँ । उहाँको नियत ठीक छैन है भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ ।
त्यसकारण, हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार भएन भने म २५ गते अगाडि नै अनसन बस्छु ।
‘म अनसन बस्छु, त्यसपछि हेरौं’
मलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ । के थाहा छ भने नेताहरु यस्तै हुन् । म धेरै भुक्तभोगी भैसकेको छु । उनीहरुसित गएर कुरा गर्न गयो, पछि गएर मिडियामा के भन्छन् भने, डाक्टर साबसित कुरा भयो, उनी आˆनो स्वार्थ हेरेर सहमत हुनुभयो भन्छन् ।
मैलेे हैन, यिनीहरुले गलत भने भनेर कतिलाई भन्दै हिँड्ने ? मैले यस्तो धोका धेरैपटक खाइसकेको छु ।
सीटीइभीटीको फेजआउट जुन छ, सर्टिफिकेट लेभलभन्दा तलको पढाइलाई फेजआउट गर्ने भनेको हो । फेजआउटको मतलव यो हैन कि जागिर खाइरहेको मान्छेलाई जागिरबाट हटाउने । उहाँहरुले ३०/४० वर्षदेखि सेवा दिइरहनुभएको छ, त्यसको म कदर गर्छु ।
तर, डेढ वर्ष पढेर कति चाहिँ ज्ञान हुन्छ ? जब कि हामी १८-२० वर्ष पढ्दा त कति कुरा मिस हुन्छ । फेरि इलेक्टि्रसिटी, प्लम्बर र स्वास्थ्य भनेको एउटै पनि हैन । यो भनेको त संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसकारण हामीले के भनेका छौं भनेदेखि त्यसलाई ५ वर्षमा फेजआउट गर्ने ।
अनमी, अहेब पढ्नलाई एसईई चाहिने हो र हेल्थ असिस्टेण्ट अनि स्टाफ नर्स पढ्न पनि एसईई नै चाहिने हो भने अब जुन पहिले डेढ वर्षको कोर्स पढ्थे, अबचाँहि ’emले साढे दुई वर्ष वा तीन वर्षवाला कोर्स पढ्न पाउँछन् । र, डेढ वर्ष पढ्नेले भन्दा अढाई वर्ष/तीन वर्ष पढ्नेले गुणस्तरीय सेवा पनि दिन्छन् ।
शहरमा सुपरस्पेसलिष्टको अवधारणा आएको छ भनेर उनीहरुलाई देखाउने । अनि नेताहरु चाहिँ उपचारका लागि विदेश जाने ।
ग्रामीण भेगका जनता जसले आˆनो पेट काटेर उनीहरुलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याए, तलब भत्ता खुवाए, उनीहरुलाई चाँहि गुणस्तरहीन सेवा दिएर हुन्छ ?
‘गगन थापालाई धन्यवाद दिन्छु’